ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ရွာက မင်္ဂလာဆောင်ပွဲလေး
ငါ မနက်ကပဲ အဲ့ဒီသီချင်း နားထောင်နေသေးတယ်..
နင်တောင်ရွာမှာ လူကြီးဖြစ်နေပြီပဲ =)
ချစ်သောသူတွေ အားလုံး ပျော်မြူနိုင်ကြပါစေလို့ နင့်ဆုတောင်းကိုပဲ ပြန်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်
ထင်တာ...နင့်ကိုတော့ အလွမ်းနာ ကိုက်နေပြီ။း)
အစ်မ ဒီပိုစ်ကို အရမ်းကြိုက်တယ် မောင်မျိုးရယ်...
ညား သွားတာ.. မဟုတ်ဖူးလား..
နောက်ကားတွေ ကျော်သလို ရှေ့ကားတွေလည်း ရှေ့မှာ အများကြီး အများကြီး...
စာရော ၊ ဓာတ်ပုံလေးရော ကြိုက်တယ်။
ရွှန်းမီပေးတဲ့ လင့်ကို ကြည့်နေတယ်။
ဟဲ့ မောင်မျိုး ဟိုဘက်ကကောင်မလေး(အစိမ်းနဲ့) နောက်ချေးပုံ နင်းမိတော့မယ်... နင်က လူချောပဲ အသားကလေးဖွေးလို့ ခင်ဖို့လည်း ကောင်းတယ်.. ခင်ဖွေး ... ခင်ဖွေး... ဟာ ဒါဂျီးက မိန်းန နံမည်ကြီး ဒီတော့ ခင်ဖွေး မလုပ်နဲ့ ကွာ.. ပြောင်းပြန်လုပ်လိုက် ... (အကြည်တော့်စကားယူ သုံးတာ)
စန္ဒရား နှင့် ဂျူနီယာတော - 'သမီးလေး.... စန္ဒရား ကို ဒီလောက် ကျင့်ရုံနဲ့ မရဘူး.... သမီး ဆရာမဆိုရင် တစ်ခါကျင့်ရင် ၈ နာရီ ကျင့်တာ... သူက music school သွားတယ်ပဲ ထား . သမီးကို မေမေက. တစ်ခါ...